लोकपिय बन्दै मोटरसाइकल ट्याक्सी ! यसरी लिन सकिन्छ मोटरसाइकल ट्याक्सीको सेवा ! - Kendra Khabar
लोकपिय बन्दै मोटरसाइकल ट्याक्सी ! यसरी लिन सकिन्छ मोटरसाइकल ट्याक्सीको सेवा !
२०७५, १ मंसिर शनिबार ०६:१६
उपत्यकामा मोटरसाइकल ट्याक्सी अर्थात् टुटल एप्स प्रतिदिन लोकप्रिय बन्दै गएको छ । टुटलको सेवा छिटो छरितो र सस्तो भएकाले लोकप्रिय बनेको हो । भारतीय नाकाबन्दीका बेला लिफ्ट दिने कल्चरलाई व्यवसायिक रूप दिँदै टुटल एप्सको विकास भएको हो । यो खबर आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।
टुटल एप्स बनाएपछि युवापुस्तादेखि बृद्धमाझ यो निकै लोकप्रिय भइरहेको छ । यसलाई सजिलो भाषामा मोटरसाइकल ट्याक्सी समेत भन्ने गरेको पाइन्छ । यो एप्सको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणले सडकमा गुडिरहेको मोटरसाइकलमा भाडा तिरेर यात्रा गर्न सक्नेछन् ।
जनवरी २०१७ बाट टुटल एप्सको सुरु भएको थियो । सस्तो र छिटो हुने भएकाले हिजोआज टुटलको प्रयोग बढेको छ । दैनिक ३ हजार यात्रुले सेवा लिने गरेको सो सो एप्समा कार्यरत कर्मचारी रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
सो एप्समार्फत सेवा दिनका लागि हालसम्म १० हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल चालकले दर्ता गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसमध्ये करीब तीन हजार चालक पूर्णकालीन रोजगार बनेका छन् । यसरी पूर्णकालीन रोजगार बन्नेले मसिक ४५ हजार रूपियाँसम्म कमाउने गरेको श्रेष्ठले बताए । सो काम गर्नका लागि आफ्नो नियमित काम छोड्नु पर्दैन फुर्सदको समयममा गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार तथा बैंकमा लामो समय काम गरेका इन्जिनियर शिक्षित भट्टले टुटल एप्सको निर्माण गरेका हुन् । ‘मोटरसाइकलमा हुने खाली सिट उपयोग गरेर सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उदेश्यले सो एप्सको सुरुवात गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ टुटल एप्स
आफ्नो मोटरसाइकलमा यो सुविधा दिन चाहने र सेवा लिन चाहने दुबैले एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । टुटल एप्सले सेवा लिन चाहेका बेला इन्टरनेटसँग जोडिएर आफू जाने रुटका मोटसाइकल चालकसँग सम्पर्क गराइदिन्छ ।
टुटलमार्फत बाइकमा यात्रा गर्दा न्यूनतम तीन किलोमिटरसम्म ६० रुपैयाँ लाग्छ । तीनदेखि ६ किलोमिटरसम्म प्रतिकिलोमिटर १८ रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भएमा प्रतिकिमी २५ रुपैयाँ लाग्छ । उपत्यकामा सञ्चालित यो सेवा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म चल्ने गर्दछ ।
यो सेवा दिएबापत पुरुष चालकले ८० प्रतिशत रकम लिन्छ र टुटलले २० प्रतिशत लिने गरेको छ । महिलाको माग बढी र चालकको संख्या कमी भएकाले महिला चालकलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला चालका भएको खण्डमा २० प्रतिशत सो एप्सले नै थप गरिदिने श्रेष्ठको भनाइ छ । चालक र यात्रुले मोबाइल एप्समार्फत नै खाता खोलेर वालेट वा क्यास पेमेन्टबाटै कारोबार गर्न पनि सकिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएका पाण्डेले लिए सपथ
पोखरामा २८ सहित गण्डकीमा थप ४६ कोरोना संक्रमित थपिए